को–को परे सचिन तेन्दुलकरको उत्कृष्ट ११ ? - Everest Dainik - News from Nepal
को–को परे सचिन तेन्दुलकरको उत्कृष्ट ११ ?
एजेन्सी । अन्तर्राट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी) ले हालै सम्पन्न सकिएको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट २०१९ को उत्कृष्ट ११ खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको । त्यसअघि र पछि पनि क्रिकेट मामिलाका जानकारहरुले आ–आफ्नो उत्कृष्ट ११ को सूची सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ ।
याे पनि पढ्नुस क्रिकेटमा सय शतक बनाएका सचिन यस देशमा भने चुके
यसैबीच, पूर्वभारतीय क्रिकेट कप्तान सचिन तेन्दुलकरले ५ भारतीय खेलाडी समावेश गरी उत्कृष्ट ११ को सूची सार्वजनिक गरेका छन् । सचिनले सार्वजनिक गरेको सूचीमा भारतीय टोलीका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको नाम अटाएको छैन् ।
सचिनको उत्कृष्ट–११ मा को–कोले पाए मौका? हेर्नुस्
केन विलियम्सन (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रित बुमराह, रविन्द्र जडेजा, हार्दिक पाण्ड्या, सकिब अल हसन, मिचेल स्टार्क, जोनी बेरिस्टो, बेन स्टोक्स र जोफ्रा आर्चर छन् ।
याे पनि पढ्नुस महान बल्लेबाज सचिन तेन्दुलकरकी छोरीलाई विवाह गर्छु भन्दै हैरान गरेपछि प्रहरी खोरमा पुगे यी युवक
ट्याग्स: sachin tendulkar